ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်တော်နဲ့တွေ့သူ
ကင်းမျှော်စင် | စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
ဖတ်လို ကိုရီးယား ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂါ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆာမိုအာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် မာလဂက်စီ မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူအို ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုတီတီလာ အီတလီ အော့စက်တီယန်
ကျမ်းစာဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒါဝိဒ်အကြောင်း သင် စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ သင့်စိတ်ထဲ ဘာပေါ်လာသလဲ။ ဖိလိတ္တိ (ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး) လူထွားကြီး ဂေါလျတ်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းလား။ ဘုရင် ရှောလုရဲ့ ရန်ရှာမှုကြောင့် တောထဲကို ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလား။ ဗာသရှေဘဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ မှားယွင်းခဲ့တဲ့အတွက် သူ ခံစားရတဲ့ ပြဿနာတွေအကြောင်းလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင်ရဲ့ စွမ်းအားတော် လှုံ့ဆော်ခံရမှုကြောင့် ရေးစပ်သီကုံးခဲ့တဲ့ ဆာလံသီချင်းတွေအကြောင်းလား။
ဒါဝိဒ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အခွင့်ထူးတွေ ရခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တဲ့အပြင် အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့လည်း ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ပရောဖက် (ကြိုဟောသူ) ရှမွေလ ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ ဘုရားသခင့် “စိတ်တော်နှင့်တွေ့သူ” ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ရှမွေလက ပြောခဲ့တယ်။—၁ ရာ. ၁၃:၁၄၊ ခမ။
ဒါဝိဒ် ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေးချိန်မှာ ရှမွေလရဲ့ ကြိုပြောချက်က ပြည့်စုံခဲ့တယ်။ သင်လည်း ဘုရားသခင့်စိတ်တော်နဲ့တွေ့သူလို့ အခေါ်ခံချင်သလား။ ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘဝမှာ အထူးသဖြင့် သူငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေက သင့်ကို ဘုရားသခင့်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသလား။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ရုသနဲ့ဗောဇတို့ရဲ့ မြေးဖြစ်သူ ယေရှဲဟာ ဒါဝိဒ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုတဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်၊ သူ့အစ်ကို ခုနစ်ယောက်နဲ့ အစ်မနှစ်ယောက်တို့ ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲ ယေရှဲက သူတို့ကို မောရှေ ပညတ်ကျမ်းသင်ပေးခဲ့တယ်။ ဆာလံကျမ်းတစ်ကျမ်းမှာ ဒါဝိဒ်က သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသခင့် “ကျွန်မ” ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ ရည်ညွှန်းထားတယ်။ (ဆာလံ ၈၆:၁၆) ဒါကြောင့် အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့မိခင်လည်း ဒါဝိဒ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ် ကောင်းတဲ့သြဇာ လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ ရုသနဲ့ဗောဇတို့အပါအဝင် “အစ္စရေးလူမျိုးနဲ့ဘုရားသခင့် ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို သူ့မိခင်ဆီကနေ ဦးဆုံး ကြားသိခဲ့ရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်” လို့ကျမ်းပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုတယ်။
ဒါဝိဒ်အကြောင်းကို စသိချိန်မှာ သူဟာ ဖခင်ရဲ့သိုးတွေကို ထိန်းကျောင်းနေရတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ သိုးထိန်းသမားလေး ဖြစ်နေပါပြီ။ သိုးထိန်းရတဲ့အလုပ်က လယ်ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာ နေ့ရောညပါ အချိန်အကြာကြီး ကုန်လွန်ခဲ့ရပုံပေါက်တယ်။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို ကြိုးစားမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဒါဝိဒ်ရဲ့မိသားစုဟာ ဘက်သလီဟင်မြို့ငယ်လေးမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီမြို့ငယ်လေးက ယုဒတောင်ကုန်းတွေရဲ့ထိပ်၊ ဆင်ခြေလျှောအပိုင်းမှာ တည်ရှိတယ်။ ဘက်သလီဟင်မြို့အနားက ကျောက်ပေါတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေမှာ အသီးအနှံ ကောင်းကောင်းထွက်တယ်။ ပိုပြီးနက်စောက်တဲ့ ဆင်ခြေလျှောတွေနဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းမှာ သစ်သီးခြံတွေ၊ သံလွင်တောအုပ်တွေနဲ့ စပျစ်ခြံတွေရှိတယ်။ ဒါဝိဒ်ခေတ်မှာ စိုက်ပျိုးထွန်ယက်လို့မရတဲ့ တောင်ပေါ်တွေမှာ တိရစ္ဆာန်စားကျက်မြေအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။ အဲဒီစားကျက်မြေကို ကျော်သွားရင် ယုဒတောကန္တာရကို ရောက်သွားပြီ။
ဒါဝိဒ်ရဲ့သိုးထိန်းအလုပ်က အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ သိုးတွေကို ဖမ်းဖို့ ချောင်းနေတဲ့ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်နဲ့ ဝက်ဝံတစ်ကောင်ကို တောင်ကုန်းတွေကြားမှာ ပက်ပင်းတိုးခဲ့တယ်။ * သတ္တိခဲလေးဒါဝိဒ်ဟာ သိုးတွေကို ကိုက်ချီသွားတဲ့ သားရဲနှစ်ကောင်နောက်ကို လိုက်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ (၁ ရာ. ၁၇:၃၄-၃၆) ဒါဝိဒ် သိုးထိန်းနေချိန်မှာပဲ လောက်လွှဲပစ် ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပုံရတယ်။ သူနေထိုင်တဲ့မြို့လေးနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာ ဗင်ယာမိန်လူတွေ နေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ “ဆံခြည်တစ်ပင်ကို လောက်လွှဲနှင့် မလွဲအောင် ပစ်နိုင်” တဲ့အထိ လက်ဖြောင့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါဝိဒ်လည်း လောက်လွှဲပစ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းလက်ဖြောင့်တယ်။—တရားသူကြီး ၂၀:၁၄-၁၆; ၁ ရာ. ၁၇:၄၉။
အချိန်ကို ဒါဝိဒ် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုခဲ့
သိုးထိန်းတဲ့အလုပ်က အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ တစ်ယောက်တည်းရှိနေရတဲ့အချိန်က များတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဝိဒ်ဟာ အဲလိုအချိန်မျိုးတွေမှာ ပျင်းရိစရာဖြစ်အောင် မနေခဲ့ဘူး။ အဲဒီအစား တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အခွင့်အရေးယူပြီး တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တယ်။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ ဆာလံကျမ်းတချို့မှာ သူငယ်စဉ်က တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြထားပုံရတယ်။ စကြဝဠာထဲက ဘုရားသခင့်အံ့ဖွယ် “လက်ရာတော်” တွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ၊ နေ၊ လ၊ ကြယ်တာရာတွေအကြောင်းကို တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့မှာပဲ။ သီးနှံဖြစ်ထွန်းတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ကျွဲနွားစတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ တောတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကို ဘက်သလီဟင်မြို့အနားက ကွင်းပြင်တွေမှာ ရှိနေချိန် အလေးအနက် ဆင်ခြင်တွေးတောခဲ့မှာပဲ။—ဆာလံ ၈:၃-၉; ၁၉:၁-၆၊ ခမ။
ဘုရားသခင်ဟာ မိမိအပေါ် သစ္စာရှိတဲ့သူတွေကို အလွန်သနားကြင်နာတယ်ဆိုတာကို သိုးထိန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတွေ့ကြုံခဲ့ရာတွေကနေ ပိုပြီးသိရှိခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဝိဒ် ဒီလိုရေးစပ် သီဆိုခဲ့တယ်– ‘ထာဝရဘုရားသခင်သည် ငါ၏သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါသည် ဆင်းရဲမခံရ။ စိမ်းလန်းသော ကျက်စားရာအရပ်၌ ငါ့ကို အိပ်စေတော်မူ၏။ သာယာသောမြစ်နားသို့ လမ်းပြတော်မူ၏။ အကယ်၍ သေမင်း၏အရိပ် လွှမ်းမိုးသော ချိုင့်ထဲသို့ လျှောက်သွားရသော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကို မကြောက်ပါ။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ လှံတံတော်နှင့် တောင်ဝှေးတော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ချမ်းသာစေပါ၏။’—ဆာလံ ၂၃:၁၊ ၂၊ ၄။
ဒါဝိဒ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ တွေ့ကြုံမှုတွေက သင်နဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်သလဲဆိုပြီး သိချင်နေမှာပါ။ ဒါဝိဒ်ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီး ကိုယ်တော့် “စိတ်တော်နှင့်တွေ့” သောသူဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ ဘုရားသခင့်လက်ရာတော်တွေ၊ ဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို အလေးအနက် တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ သင်လည်း အဲဒီလိုပြောနိုင်ပါသလား။
ဘုရားသခင့် ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတချို့ကို သင် အသေအချာ ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းလိုတဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်ဖူးပါသလား။ လူသားတွေနဲ့ ဘုရားသခင် ဆက်ဆံပုံကို တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့အခါ ဘုရားသခင်ရဲ့ အရည်အသွေးတော်တွေကို တွေ့မြင်ပြီး ကိုယ်တော်ကို ချစ်တဲ့စိတ် ခံစားဖူးပါသလား။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ဖို့ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော်တွေကို တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဆုတောင်းပြီး စဉ်းစားတွေးတောဖို့လိုတယ်။ အဲလိုအလေးအနက် စဉ်းစားတွေးတောတာက ဘုရားသခင်နဲ့ ရင်းနှီးလာစေပြီး ကိုယ်တော့်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာ တိုးပွားလာစေတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး အဲဒီအခွင့်ထူးကို တန်းတူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘုရားသခင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။
ဘုရင်ရှောလုဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကို ဦးဆောင်ဖို့ မသင့်တော်တော့တဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က ပရောဖက် ရှမွေလကို ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “ရှောလုကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာမှ ငါပယ်သောကြောင့် သင်သည် အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး စိတ်မသာညည်းတွားလျက်နေလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ဘူးကို ဆီနှင့်ပြည့်စေလော့။ ဗက်လင် [ဘက်သလီဟင်] မြို့သား ယေရှဲရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ သူ၏သားတို့တွင် ငါ့အဖို့ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကို ငါပြင်ဆင်ပြီ။”—၁ ရာ. ၁၆:၁။
ဘက်သလီဟင်မြို့ကို ရှမွေလရောက်တဲ့အခါ သားတွေကို ဆင့်ခေါ်ဖို့ ယေရှဲကို ပြောတယ်။ သူတို့ထဲက ဘယ်တစ်ယောက်ကို ဘုရင်အဖြစ် ရှမွေလ ခန့်အပ်မှာလဲ။ အကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ ကိုလူချော ဧလျာဘကို ရှမွေလ မြင်တဲ့အခါ ‘သူများ ဖြစ်နေမလား’ လို့တွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ဒီလိုပြောတယ်– ‘သူ၏မျက်နှာ သူ၏အရပ်ကို မကြည့်မရှုနှင့်။ သူ့ကို ငါပယ်ပြီ။ ထာဝရ ဘုရားသခင်သည် လူမြင်သကဲ့သို့ မြင်တော်မူသည်မဟုတ်။ လူသည် အဆင်းသဏ္ဌာန်ကို ကြည့်ရှုတတ်၏။ ထာဝရဘုရားသခင်မူကား နှလုံးကို ကြည့်ရှုတတ်သည်။’ အဘိနဒပ်၊ ရှိမာနဲ့ တခြားသား လေးယောက်ကိုလည်း ဘုရားသခင် ပယ်လိုက်တယ်။ ကျမ်းစာမှာ ဒီလိုဆက်ပြောထားတယ်– “‘သင်၌သားမရှိပြီလော’ ဟု ယေရှဲအား မေးလျှင် ယေရှဲက ‘အငယ်ဆုံးသောသား ရှိပါသေး၏။ သိုးတို့ကို ထိန်းကျောင်းလျက် နေပါသည်’ ဟုပြောဆို” ၏။—၁ ရာ. ၁၆:၇၊ ၁၁။
ရှမွေလကို ယေရှဲပြောလိုက်ပုံက ဒီလိုသဘောမျိုးလည်း သက်ရောက်ပုံရတယ်– ‘ခင်ဗျား ရှာနေတဲ့သူက ဒါဝိဒ် မဖြစ်နိုင်ဘူး။’ ဒါဝိဒ်ဟာ မိသားစုမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်လို့ သူ့ကို လူရာမသွင်းကြဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ခမျာ သိုးကျောင်းနေခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုပဲ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်က စိတ်နှလုံးကိုပဲကြည့်တဲ့အတွက် ဒါဝိဒ်မှာရှိတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို ကိုယ်တော် သိမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ ဒါကြောင့် ယေရှဲက လူလွှတ်ပြီး ဒါဝိဒ်ကို သွားခေါ်နေချိန်မှာ ရှမွေလကို ဘုရားသခင်က ဒီလိုပြောတယ်– ‘“ဤသူပေတည်း။ ထ၍ဘိသိက်ပေးလော့” မိန့်တော်မူ၏။ ရှမွေလသည်လည်း ဆီဘူးကိုယူ၍ သူ၏အစ်ကိုစုထဲမှာ သူ့ကို ဘိသိက်ပေးလေ၏။ ထိုနေ့မှစ၍ ထာဝရဘုရားသခင်၏ [စွမ်းအားတော်] သည် ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လေ၏။’—၁ ရာ. ၁၆:၁၂၊ ၁၃။
ဒါဝိဒ်ကို မင်းလောင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ချိန်မှာ သူ့အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာကို မသိရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှစ်အတော်ကြာတဲ့အခါ ဒါဝိဒ်ရဲ့အစ်ကိုသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ဧလျာဘ၊ အဘိနဒပ်နဲ့ရှိမာတို့ဟာ ဘုရင်ရှောလုရဲ့စစ်တပ်မှာ အမှုထမ်းနေပါပြီ။ ကျန်တဲ့ညီအစ်ကိုငါးယောက်ကတော့ ငယ်သေးတဲ့အတွက် စစ်မှုမထမ်းသေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့တွေဟာ စစ်တပ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက် ၂၀ မပြည့်သေးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ (တောလည်ရာ ၁:၃; ၁ ရာ. ၁၇:၁၃) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ချိန်မှာ သူ့အသက် တော်တော်ငယ်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဝိဒ်အသက်သာ ငယ်တာ၊ ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ် သူ့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်အကြောင်း သူသိထားရာတွေကို အလေးအနက် တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။
ကနေ့ လူငယ်တွေကိုလည်း အဲဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဝတ်ပြုရေးအကြောင်း တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့၊ ဘုရားသခင့်ဖန်ဆင်းရာတွေကို လေးမြတ်တန်ဖိုးထားဖို့၊ ဘုရားသခင်အကြောင်း ကျမ်းစာပြောဆိုရာတွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့ သားသမီးတွေကို မိဘတွေ အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (တရားဟောရာ ၆:၄-၉) လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း အဲဒီအရာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့အတွက် အထောက်အကူရနိုင်အောင် ကင်းမျှော်စင်နဲ့နိုးလော့! မဂ္ဂဇင်း *စတဲ့ ကျမ်းစာအခြေပြုစာပေတွေကို ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
စောင်းကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးတတ်
သိုးထိန်းဘဝအကြောင်းကို ရေးစပ်သီကုံးခဲ့တဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့ ဆာလံကျမ်းအတော်များများမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ တေးဂီတအကြောင်းပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘယ်လိုသံစဉ်နဲ့ သီဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကနေ့အချိန်မှာ မသိရတော့ပါဘူး။ သိရတာကတော့ အဲဒီဆာလံကျမ်းတွေကို ရေးစပ်တဲ့သူဟာ အရမ်းတော်တဲ့ တေးဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်ဆိုရင် ဒါဝိဒ် သိုးကျောင်းရာကနေ ဘုရင်ရှောလုဆီ အခစားဝင်ဖို့ ဆင့်ခေါ်ခံရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သူဟာ စောင်းကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးတတ်လို့ဖြစ်တယ်။—၁ ရာ. ၁၆:၁၈-၂၃။ *
ဒီစောင်းတီးတဲ့ အတတ်ပညာကို ဒါဝိဒ် ဘယ်ကနေ ဘယ်အချိန်မှာ တတ်မြောက်လာခဲ့တာလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူဟာ သိုးတွေကို ကွင်းပြင်မှာ ထိန်းကျောင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဘုရားသခင်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးမွမ်းတတ်နေပြီလို့ ယူမှတ်ရပါတယ်။ ဘုရားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး သူ့မှာ ရှိထားတဲ့အတွက် သူ့ကို ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ ဒါဝိဒ်ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းကိုပဲ ဆွေးနွေးထားပေမဲ့ သူ့အသက် နှောင်းပိုင်းအချိန်မှာလည်း သူဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ ဆက်ပြီးရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ဘက်သလီဟင်မြို့အနားက ကွင်းပြင်တွေမှာ သူ သိုးကျောင်းတုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်သဘောတွေကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တင်ပြခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်သဘောတွေက ဆာလံကျမ်းတွေမှာ ထင်ဟပ်နေတယ်။ “ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလကို အောက်မေ့၍ အလုံးစုံသော အမှုတော်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လက်တော်နှင့်ပြုပြင်သော အရာများကိုလည်းကောင်း ဆင်ခြင်ပါ၏” လို့ ဘုရားသခင်ဆီ ဒါဝိဒ် ချီးမွမ်းပြောဆိုနေတာကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ (ဆာလံ ၁၄၃:၅) ဒီဆာလံကျမ်းနဲ့ တခြားဆာလံကျမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့ လှိုက်လှဲတဲ့ ချီးမွမ်းမှုတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ တွေ့ချင်သူအားလုံးကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
^ အပိုဒ်၊9အရင်က ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဆီးရီးယား ဝက်ဝံညိုတစ်ကောင်ဟာ ပျမ်းမျှ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် ၃၁၀ ရှိပြီး သူ့ရဲ့လက်သည်းချွန်ကြီးတွေနဲ့ ကုတ်ဖဲ့ခံရတဲ့ လူ ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟာ အသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီနယ်မြေမှာ ခြင်္သေ့တွေလည်း အများအပြားရှိခဲ့ဖူးတယ်။ “ခြင်္သေ့ပျို” တစ်ကောင်ကို “သိုးထိန်းအလုံးအရင်း” နဲ့လိုက်ဖမ်းတာတောင် မမိဘူးလို့ ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတယ်။—ဟေရှာယ ၃၁:၄၊ သမ္မာ။
^ အပိုဒ်၊ 20 ယေဟောဝါသက်သေတွေ ထုတ်ဝေပါတယ်။
^ အပိုဒ်၊ 22 ဒါဝိဒ်ကို ထောက်ခံပေးတဲ့ ဘုရင့်အပါးတော်မြဲတစ်ဦးကလည်း ဒါဝိဒ်ဟာ ‘အဆင်းလှသူ၊ နှုတ်သတ္တိရှိသူဖြစ်ပါ၏။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူပါ၏’ လို့ပြောခဲ့တယ်။—၁ ရာ. ၁၆:၁၈၊ ခမ။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်တော်နဲ့တွေ့သူ
မကောင်းမှုအားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တစ်စုံတစ်ဦး ရှိသလား
ဘယ်သူက ဒီလောကကို အမှန်တကယ် အုပ်ချုပ်နေသလဲ
ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့အုပ်စိုးရှင် ဖော်ထုတ်ခံရ
သာယာစိုပြည်တဲ့ တိုင်းပြည်က “ထွက်ကုန် ခုနစ်မျိုး”
‘အို ယေဟောဝါဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို သိတော်မူ၏’
ဘုရားသခင်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ
လျှာကို ပညာရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ပုံ
အခွန် ဆောင်ဖို့ လိုသလား
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ကင်းမျှော်စင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
ကင်းမျှော်စင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁